အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကိန် လို့ခေါ်တဲ့ ယိုးဒယား အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ
နောက်ပြီး ပုံဘေးက ပင်စိမ်းရွက်ကိုလဲသင်ပြီး ရေစိမ်ထားနော်....
(အမလေး အကုန် ကိုစေ့စေ့ပေါက်ပေါက် ပြောနေရတာပဲ ခေတ်ကာလသားသမီးတွေများ တကယ် တကယ်....ပြောချင်ဘူး ပြောကိုမပြောချင်ဘူး ဒေါ်မြလေးလို ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးနဲ့ဖိ) ဒါကတော့ ပြဇာတ်မရေးတာ ကြာလို့ စိတ်နည်းနည်းပါသွားတာ ခွင့်လွှတ် .....
နောက်အဆင့်ကတော့ ခုနက အုန်းနို့ ဆီသတ်ထားတာထဲကို ဟင်းနှစ် နှစ်ထုပ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ် ပြီးရင် ဆက်ပြီး မွှေးလာအောင်မွှေပေးနေပါ။ (မတူးစေနဲ့နော်......အင်း ပြောရပြန်ပြီ ကဲဟာ .....ဒေါက်.......ခေါင်း ကို ခေါက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်) မွှေးလာပြီဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး ပုံမှာ ပြထားသလို ခုနက နယ်ပြီး နပ်ထားတဲ့ ဝက်သား ကို ထည့်ကြော်ပါမယ် ဝက်သား ကိုမွှေးလာအောင်ကြော်ပေးပါမယ်နော်
ဒီမှာတော့ ဆိုင်တွေမှာ သွားစားရင် ဝက်ခေါက်တို့ ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးဖျော် တို့ ကြက်ဟင်းခါးသီး ပြုတ် တို့ ကန်စွန်းရွက်ပြုတ် တို့ စတာတွေ နဲ့ အရွက်စိမ်း ပင်စိမ်း ပူဆီနံ စတာတွေနဲ့ လဲတွဲစားကြပါတယ် ကြိုက်သလိုသာ စားကြပေတော့နော်.........
Posted by တီချမ်း at 9:28 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, မုန့်တီ
Rita April 21, 2011 at 9:37 PM
TZA April 21, 2011 at 10:03 PM
စားမယ် ဝါးမယ် ပါးပါးလှီးမယ်.. ဘဲသွေးနဲ့သိပ်ကောင်းတာ..
Addy Chen April 21, 2011 at 10:28 PM
ဒေါ်ရီတာ ခရမ်းသီး မကြိုက်ရင် တခြား သီးစုံကုလားဟင်းထဲ ထည့်တဲ့ အသီးတွေနဲ့ လဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်
ဒါပေါ့ ဒါပေါ့ ကိုတင်ဇာ နောက်နေ့ကျရင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကျိုင်းတုံစတိုင်လ်အတိုင်း ကြက်သွေးလေးနဲ့ တင်ပေးအုံးမှာ
နွေးနေခြည် April 21, 2011 at 10:35 PM
ဒီမှာတော့ ယိုးဒယားဆိုင်မှာ သွားစားဖြစ်တယ်။ တီ ချက်သလောက်တောင် မစုံပါဘူး။ အုန်းနို့ရည်ရယ် fish ball ရယ်ပဲပါတယ်။ တီ့လက်ရာက ကောင်းမှာသေချာတယ်း)
Iora April 21, 2011 at 11:03 PM
မုန့် ဖတ်က မုန့် တီဖတ်လာ။ဟင်?
Addy Chen April 21, 2011 at 11:25 PM
အော် လက်စသတ်တော့ နနခ က နခမ ကိုး ခုမှသိတော့တယ်
ဟုတ်တယ် အိုင်အိုရာ မုန့်တီဖတ်ပါ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ရခိုင်မုန့်တီ ဖတ် တူတူပါပဲ ဒီမှာ တော့ ယိုးဒယား လိုခေါက်နွန်ကျန်းမ် လို့ခေါ်ကြတယ်
Addy Chen April 22, 2011 at 10:22 AM
အသားမပါဘဲ တခြား အသီးတွေ ပိုထည့်ပြီး ချက်ကြည့်လေ
အချိုမှုန့်တော့ ပိုထည့်ပေါ့ အေ
ဘာက ရယ်ရလို့လဲပေါက်ရဲ့ ရယ်စရာလဲ မပါဘူး ဒါ အတည်ရေးထားတာပါရှန်.......
သက်ပိုင်သူ April 22, 2011 at 4:20 PM
Green curry ဆို ”အသေ”ကြီုက်.. “ရေလျှံတုန်း” ဘန်ကောက်ကို “ကညော့” လာခဲ့ပီး တီ့အိမ်ပေါ် “ဖလမ်းဖလမ်း”လာထမယ်... စားချင်တာတွေ “နင့်”နေအောင် “၀က်ဝက်ကွဲ”အောင် ချက်ကျွေးခိုင်းမယ်..
subuueain April 22, 2011 at 8:09 PM
ချက်ထားတာက စားချင်စရာလည်းကောင်း။ ရေးထားတာလည်းဖတ်လို့ကောင်း
နောက် တမျိုး အစိမ်း မာမာသေးသေးလေးတွေလေ (ပဲစိမ်းသီးစေ့လေးတွေလိုမျိုး) ရှိသေးတယ် ခရမ်းသီး မျိုးနွယ်ပဲ နည်းနည်းခါးတယ် ...အဲဒါ ခရမ်းကဆော.သီးလို. ခေါ်တယ် တီရဲ.
ချစ်ကြည်အေး April 23, 2011 at 10:08 AM
တီချမ်း.....စားလို့အရမ်းကောင်းမှာ...ကြည့်တာနဲ့သိတယ်။ မောင် ကံကောင်းလိုက်တာကွယ်...။ ချက်ပြုတ်ကျွေးနေတာတွေ တွေ့လို့ ခုလို မှတ်ချက်ချမိတယ်။ ဘလော့ဂ်နောက်ကွယ်မှာ တီချမ်းကြီး မောင့်ခေါင်းကို သနပ်ခါးတုံးနဲ့ ထုချင် ထုနေမှာ...ဒါတော့ တို့ မသိဘူးနော်.....:)
Addy Chen April 23, 2011 at 5:24 PM
ရှင်လာမှ မောင့်ကို ချက် “ကျွေး” ခိုင်းမယ်
ကျုပ်ပါ “ကုန်းဆင်ဒ” အုံးမှာ
တခါတည်း ဗိုက် “ပွင့်” သွားစေရမယ်
ကျေးဇူးပါ စုဘူးရေ တုတ်ထိုး လဲ လိုက်စားခဲ့တယ်
ကျေးဇူးတင်တယ် အနော်တိမတ်စ်ရေ ပြင်လိုက်မယ် ကစော် က ဒီလိုပေါင်းတာထင်တယ်နော်
ဒေါ်ချစ်ရေ တကယ်ပဲ ချက်ကျွေးတုန်းတော့ ချိုတယ် ပြီးရင် တော့ ထုတော့ တာပဲ လင်နဲ့မယားဆိုတော့ ဒီလိုပဲပေါ့ ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို ခဏခဏ ကို ကိုက်ပစ်တာပဲ
သစ်သစ် April 24, 2011 at 7:43 AM
ရောက်တယ် တီချမ်းရ.. အသစ်တင်တိုင်းလာဖတ်တယ် စာမရေးဖြစ်တာက ကျောင်းတက်နေလို့ပါ အိမ်မှာတောင်ချက်မစားဖြစ်တော့ ချက်တာတွေမရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ တီချမ်းချက်တာတွေပဲ သားရည်လာကျတော့မယ်လေ .. မကောင်းဘူးလား..း)
Kyaw Hnin Se Lwin April 24, 2011 at 7:44 AM
jr April 24, 2011 at 4:57 PM
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတော့ ကြိုက်တယ်။ ခရမ်းသီးထည့်ချက်တာတော့ ဒီတခါပဲ မြင်ဖူးတယ်။
SHWE ZIN U April 24, 2011 at 8:15 PM
ခရမ်းသီး ထည့် ချက်တာတော့ စားဖူးဘူး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ နဲ့ တူတယ်နော် စားကောင်းမှာပါ
ထိုင်းတွေကဘာလို.ခရမ်းသီး ခရမ်း ကစော့်သီးကြက်ဟင်းခါးသီးပင်စိမ်း ပူဆီနံတွေကိုထည်.စားကြတာလဲမသိဘူးနော်မုံ.ဟင်းခါးထဲလဲထည်.စားတာဘဲ
Addy Chen April 26, 2011 at 12:28 AM
အဲ့တာတွေ အကုန်က အရွက်ပြုတ်တွေပဲဆိုတော့ အရွက်စားတာ ကောင်းပါတယ်
တီတောင် နောက်နေ့ တွေကျရင် သက်သက်လွတ်တွေ တင်ပေးအုံးမယ်
A. Tan April 7, 2013 at 1:40 PM
Can you please put upaburmese coconut curry recipe?
တီချမ်း April 11, 2013 at 2:00 PM